UNGAZILAHLA NJANI IINWELE EZIMVA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda UngaziThoba njani iinwele eziMva
Ukuba ufuna iinwele ezinesitayile kunye nezobuchwephesha, uya kuthanda iinwele ezibuyisiweyo. Iinwele ezirhuqayo zamadoda zisetyenzisiwe kuyo yonke le minyaka njengendlela ekhawulezayo yokwenza isimbo sokubukeka okupholileyo kodwa okunobunkunkqele. Elona candelo lililo kukuba ukufunda indlela yokubuyisela iinwele zakho kulula, kuyasebenza, kwaye kunokusebenza nenani leenwele ezahlukeneyo.
Ukusuka kwi ngaphantsi okanye fade emacaleni ukuya kwiinwele ezinde, ezingqindilili, okanye ezigobileyo ngaphezulu, iinwele ezimdaka zala maxesha zilungeleleneyo. Esi sikhokelo siza kukufundisa yonke into oyifunayo malunga nendlela yokufumana iinwele ezibuyileyo.
1Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
MbiniUziqeqesha njani iinwele zakho ukuba zibuyele emva
3UngaziThambisa njani iinwele eziGobile
4Ungazityibilika njani iinwele ezinde
5Izitayile eziCandiweyo eziBuyile
5.3Iinwele eziMva eziDibeneyo
6Ezona mveliso ziLungileyo ukuCoca iinwele zakho
6.4Ikama vs Iminwe
7UngaziThoba njani iinwele eziMva
Izinwele ezibuyisiweyo zinembali ende njengezitayile ezisesikweni. Ngenxa yokuthandwa kwayo, abafana kunye nabachebi kwihlabathi liphela baye babhala isitayile ngeendlela ezininzi. Umzekelo, kule minyaka idlulileyo, ukubuyela umva komgaqo ongaphantsi kuye kwaba ngumsindo. I-Hipsters ikuthandile ukusikwa kunye nesitayile sokwahluka kwayo okuphezulu, okungathandekiyo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna amacala aphelileyo, ungacela umchebi wakho ukuba abuye umva ukubuna - isezantsi , phezulu, okanye phakathi kuxhomekeke kwindlela amafutshane ofuna amacala kunye umva ukujonga.
Emva koko unokukhetha indlela emfutshane okanye ende ofuna ukuba iinwele ezingaphezulu zibe yiyo. Ngelixa sicebisa ngamandla ukukhula kweenwele zakho kunye nokuhamba umva omde, le iinwele zamadoda zidumileyo ziyazixhasa neenwele ezimfutshane ngokunjalo.
Ekugqibeleni, ungalungisa iinwele nangayiphi na indlela oyifunayo okokude iinwele ezingaphezulu zikopishwe umva. Unokukhetha ukutsiba ukugqibelela, okukhazimlayo kunye nokufaka i-matte pomade okanye i-wax yeenwele kwisitayile sendalo, esenziwe ngombala.
Uziqeqesha njani iinwele zakho ukuba zibuyele emva
Emva kokucheba iinwele, umceli mngeni wokwenene kukufunda ukuba uqeqesha njani iinwele zakho ukuba zibuyele umva. Uninzi lweenwele zomfana aluzibuyisi ngokwendalo, kwaye ukuba uneenwele ezingqindilili okanye ezigobileyo, ukudibanisa kunye nokugcina iinwele zakho zibuyela umva imini yonke kunokuba yingxaki. Sebenzisa ipomade elungileyo okanye i-wax yeenwele ephethe isibambo esomeleleyo.
Qala ngokuxubha iinwele zakho emva kweshawa. Xa usebenzisa ishampu kunye nesilungisi, sebenzisa ikama ukusasaza ngokulinganayo kunye nesitayile seenwele zakho ngaphambi kokuhlamba. Ke, xa usomisa iinwele kusasa okanye ebusuku ngaphambi kokuba ulale, yoma ngetawuli kwaye ngokungaguquguqukiyo kodwa uyibuyise kakuhle. Zive ukhululekile ukuvuthela ubushushu obuphantsi kwaye usebenzise ikama enamazinyo abanzi okanye ibrashi yebrashi yesitayile ukuze wenze isitayile esifunwayo, nokuba uceba ukulala. Ngokuthe ngcembe, iinwele zakho ziya kuqala ukuziqhelanisa nokuphindaphinda.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba awuyi kuziqeqesha iinwele zakho ukuba zibuyele ngentsasa enye. Kuya kufuneka ungaguquguquki kwisitayile sokujonga, ukufaka imveliso, kunye nokukama iinwele zakho. Kodwa ixesha elingaphezulu, iinwele zakho ziya kuqala ukubuyela umva.
UngaziThambisa njani iinwele eziGobile
Izinwele ezisongiweyo kunzima ukuzenza mbuna. Ngethamsanqa, iinwele ezibuyisiweyo ezibuyileyo zilungele abo banamaza angalawulekiyo okanye ii-curls. Ngapha koko, iinwele ezigotyiweyo ezibuyiselwe umva zinika ukujija okungafaniyo nesitayile. Ukudibanisa iinwele ezigobileyo, landela ezi zikhokelo.
Sebenzisa ibrashi okanye ikama ukutsala iinwele zakho. Ukwenza oku emva kokuhlamba okanye xa iinwele zakho zimanzi kancinci ziya kusebenza ngcono.
Faka isicelo se-pomade okanye i-wax ekumgangatho ophezulu kwizinwele zakho ezimanzi kwaye usebenze ngayo ngeminwe nangezandla.
Emva koko qalisa ukudibanisa imveliso ngeenwele zakho ukuyisasaza ngokulinganayo.
Emva koko, vuthelisa iinwele zakho umva ngaphambili kunwele lwakho. Njengoko usomisa iinwele zakho, sebenzisa ibrashi ukutsala iinwele zakho ngasemva kwaye wenze umphezulu ogudileyo.
Ukuba ufuna ukuqaqamba okucwebezelayo, dibanisa iinwele zakho ngqo. Ngokwemvelo, ngebrashi ebunjiweyo, musa ukubrasha kakhulu kuba oku kunokucaba iinwele zakho. Uya kufuna ivolumu encinci kunye nokuthungwa okongeziweyo okunikezelwa ziinwele zakho ezigobileyo.
Ngelixa ii-curls zakho zisazobonakala, ngexesha iinwele zakho zomile, ziya kuhlala zibuye ebusweni bakho kwisimbo seenwele esilungisiweyo.
Ungazityibilika njani iinwele ezinde
Izinwele ezinde ezityibilikileyo ziye zaqhubeka ukuba zezona zilungileyo iinwele zamadoda zokufumana. Njengamadoda aneenwele ezinde azi kakuhle, ubude obuphakathi ukuya kubude kunokuba nzima ukulawula nokulawula. Kwangokunjalo, ukuhombisa inani leenwele entlokweni yakho kuthetha ukuchitha ixesha elininzi phambi kwesipili- umgudu kunye nengxaki uninzi lwabafana alufuni. Nangona kunjalo, isisombululo esilula kunokuba kukudibanisa iinwele zakho ezinde.
Njengokuba kunjalo, ukubuyela emva kweenwele ezinde kulula ngakumbi kwisitayile kunye nokuzigcina njengoko ubunzima bezitshixo zakho buya kugcina iinwele zibanjiwe zangqinwa. Kwakhona, qiniseka ukusebenzisa ibrashi kunye nesomisi ngaxeshanye. Kananjalo sikwacebisa ukufaka imveliso elula yokugqibezela.
Ukuba ukhulisa iinwele ezinde kwaye ufuna i-hairstyle epholileyo ekhangeleka ngathi ingumsebenzi kwaye iyonwabisa, buza i-barber yakho malunga nomqolo obuyileyo.
Izitayile eziCandiweyo eziBuyile
Ngoku ukuba uyazi ukuphatha iinwele ezahlukileyo kunye nobude, masizikhuphele kweminye imizekelo yeenwele zangoku ezibuyileyo.
I-undercut ebuyela umva yenye yeenwele eziphezulu zamadoda ngalo mzuzu. Ngoboya obufutshane, obudibeneyo emacaleni nasemva kwentloko kunye neenwele ezinde ngaphezulu, iinwele ezingaphantsi zinika ubuqaqawuli kwaye kulula ukuzenza. Inkqubo ye- slick back undercut idlala kolu luvo lunomtsalane, oluphakamileyo, oluxuba okusesikweni kunye nokungaqhelekanga.
Emva kokushiya ubude ngaphezulu kunye nokufumana umva kunye namacala kunqunyulwa kubude obufanayo, abafana banokuzikama iinwele zabo kwaye baxube kwimveliso yesitayile. Ukubonakala kokugqibela okuthe tye kulungele nawuphi na umcimbi.
Ukudakumba okubuyayo kudibanisa ubuchule bokuphela obupholileyo kunye neenwele ezingasemva. Zininzi iintlobo ezahlukeneyo zokucheba iinwele - eziphantsi, eziphakathi, eziphakamileyo kunye nenkqayi- kwaye izinto nganye zinokwenza ukuba iinwele zakho zingaqhelekanga.
Ngapha koko, umphezulu obuyelwe ngasemva kwesi sinwele ufuna ubude, ke ukuthintela amacala ngefade kongeza ukujija kwanamhlanje kutshintsho phakathi kweenwele ezinde nezimfutshane. Njengenye yokusikwa okucelwa ngokufuthi, buza i-barber yakho ukuba ngaba iinwele ezibuyisiweyo ezisikiweyo zilungile kuwe.
Iinwele eziMva eziDibeneyo
Ikama ngasemva lidweliswe ngakumbi ngobume bokugqibezela kwendalo. Nangona uninzi lwenkangeleko lufana kakhulu nokubuyela umva, iinwele ezisemva komatshini zithintela ukuziva okuqaqambileyo kunye nokuqaqamba. Le ndlela yokuthambisa iinwele zamadoda ngokwendalo sele iyinto ethandwayo.
Ukudibanisa iinwele zakho emva, sebenzisa ibrashi okanye ikama ebanzi. Emva koko faka i-matte okanye i-low-shine pomade okanye i-wax. Ngokukhanya okukhanyayo, okurholileyo okwenziwe ngumoya, qiniseka ukuphakamisa njengoko utsala iinwele zakho ebusweni bakho. Ukubrasha iinwele zakho ngokwamanani kunokukunika ukubonakala okuthe chatha, okungcolileyo.
Ezona mveliso ziLungileyo ukuCoca iinwele zakho
Ukulungelelanisa kakuhle iinwele zamadoda kunye nokufezekisa isitayile esiya kuhlala imini yonke, ufuna iimveliso ezifanelekileyo. Bonke abantu bayazi ukuba ukusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo kunokufezekisa nantoni na, kwaye oku kuyasebenza nasekuzilungiseni nasekuzilungiseni.
Funda malunga neempawu zemveliso nganye, emva koko uthathe isigqibo sokuba yeyiphi efanelekileyo yeenwele zakho kunye neenwele ozifunayo.
IPomade yeyona nto inesitayile semveliso yamadoda afuna ukubuyisa iinwele zawo. Ifezekisa ibhalansi elungileyo phakathi kokubamba iinwele zakho emva kwaye ungazilinganiseli. Zimbini iintlobo ezahlukeneyo ze-pomade: esekwe ngeoyile kunye nangamanzi.
Iipomade ezisekwe kwioyile ziluncedo ukuba uneenwele ezomileyo kwaye ufuna ukukhanya okuninzi, kodwa kuyaziwa ukuba kunzima ukuzihlamba. Kwelinye icala, uninzi lwabathengi lukhetha kakhulu i-pomades esekwe emanzini enikezela ukubanjwa okufanayo kwaye ihlambe ngokulula ngamanzi.
Ezona mpawu zintle zepomade zivelisa iintlobo zokubamba kunye nokukhanya. Kule nwele, sicebisa ukuba indawo iphakathi ibambe kwaye ikhanye. Ukuba uhlamba nje iinwele zakho umva kwaye ufuna ukubonakala okubhaliweyo, zama ukugqiba i-matte pomade eya kugcina ngcono ubume bendalo beenwele zakho. Nazi iipomades eziphezulu kwimarike!
I-wax iyaguquguquka kwaye kulula ukuyisebenzisa. Inenjongo enye kuphela: ukubamba iinwele zakho. Ngokungafaniyo ne-pomade, awukho umngcipheko wokucaba ii-curls zakho zendalo okanye ukulahleka kwevolumu xa usebenzisa i-wax yeenwele. Kwicala elisezantsi, i-wax ayikuniki ukukhanya okukhulu. Kulabo bantu bafuna ukugcina iinwele zabo emva kwaye bajonge ngokwendalo ngaphandle kokongeza ukukhanya okanye ubunzima, i-wax yeyona mveliso ifanelekileyo. Nazi ezinye zeenwele ezona zilungileyo kwintengiso.
I-TIGI yeNtloko yeBhedi yaMadoda eyaHlulwa ngokuSebenza ngeWax, i-3 yeeyunce Izimvo eziyi-3,995 I $ 9.97 Jonga iAmazon
I-GATSBY EHLAWULA I-RUBBER SPIKY EDGE Hair Wax, 80g / 2.8oz Izimvo eziyi-1,741 $ 13.48 Jonga iAmazon
Udongwe luye lwathandwa njengesixhobo sokucheba iinwele ezisemva kule minyaka idlulileyo. Ukuba uneenwele ezinamafutha, udongwe lulungile kuba luya kwenza ukuba iinwele zakho zome kwaye zinike ubume bendalo. Inkathalo kufuneka ihlale isetyenziselwa ukuyisebenzisa kancinci, njengoko okuninzi kunokuba nako ukuzomisa iinwele kwaye kwenze kube nzima ukwenza isitayile kubuyelo olucekeceke.
Ikama vs Iminwe
Amadoda ngokwendalo azilungisa iinwele zawo esebenzisa iminwe ukuhambisa iimveliso ngokulinganayo. Ngokuqinisekileyo le yeyona ndlela ilula yokuhambisa iinwele zakho, nangona zinokuba mbi. Ukugqiba okucocekileyo, okuthe tye kunye nokutyibilikayo, sebenzisa ikama yezinyo elungileyo. Ngokubanzi, ukucoceka kwamazinyo, ukucoceka kweenwele zakho ezisemva kuya kuvela.
Itawuli yome iinwele zakho de kube kumanzi.
Faka imveliso kwizinwele zakho, usasaze ngokulinganayo kumacandelo amade.
Dibanisa iinwele zakho ngasemva kwentloko yakho.
Nokuba uvumela iinwele zakho ukuba zome ngokwendalo ukuze ukhululeke ujonge umva, okanye uvuthele isitayile sakho endaweni yevolumu eyongeziweyo kwaye ubambe.
Nje ukuba iinwele zakho zomile, gqiba ngokuba uyafuna ukufaka imveliso eyongezelelekileyo ukuze ubambe. Olu lukhetho lomntu siqu kuxhomekeke ekubeni ufuna ixesha elide kangakanani ukuhlala uhlala endaweni nokuba ufuna ukugcina ubume bendalo beenwele zakho.
Izinwele ezihlikiweyo zangasemva zamadoda zijongwa lixesha. Ukulandela le miyalelo kuya kukufumanela iinwele zamadoda xa uqeqesha iinwele zakho ukuba zihlale zibuyele endaweni yazo.
iinwele zamakhwenkwe abantwana
ukuphuma kunye nenyanga uphawu calculator
indlela yokufumana uphawu lwakho